Mihamampididoza Ny Fanehoan-kevitra Ara-Politika Ao Amin’ny Media Sosialy Ao Tanzania · Global Voices teny Malagasy
Mihamampididoza Ny Fanehoan-kevitra Ara-Politika Ao Amin'ny Media Sosialy Ao Tanzania
Voadika ny 03 Oktobra 2016 8:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, Italiano, Español, Français, Ελληνικά, English
Ny famantarana ny cybercafé ao Tanzania. Iray amin'ireo firenena 10 voalohany manana mpisera maro indrindra eto Afrika i Tanzania . sary Creative Commons avy amin'ny mpisera Flickr Aslak Raanes.
Niseho teo anatrehan'ny fitsarana Tanzaniana tamin'ny 14 Septambra lasa teo ny olom-pirenena Tanzaniana miisa dimy: Dennis Temu, Suleiman Nassoro, Shakira Makame, Juma Mtatuu, ary i Dennis Mtegwa, voampanga ho nanivaiva ny Filoha John Magufuli tao amin'ny media sosialy. Nandà ny fiampangana azy ireo olona dimy ireo.
Voalaza fa nizara votoaty manafintohina mamely ny filoha sy ny mpitandro ny filaminana izy dimy ireo teo anelanelan'ny faha-24 sy ny faha-30 Aogositra tamin'ity taona ity, tamin'ny fanitsakitsahana ny andininy faha-118 (a) ao amin'ny lalànan'ny Fifandraisandavitra Elekitronika sy Paositaly laharana faha 3 nivoaka tamin'ny 2010.
Ny andininy dia manasazy heloka bevava ny olona rehetra :
Minia, mamorona, na mandrisika na mitarika fampitana fanehoan-kevitra, fangatahana, soso-kevitra na fifandraisana hafa manana endrika maharikoriko, vetaveta, diso, mandrahona na manafintohina ankarihary amin'ny fikasana hanorisory, hihoa-pahefana, handrahona na hanohintohina olona iray hafa…
Tamin'ireo dimy voampanga, nilaza ny fampanoavam-panjakana fa namoaka fanehoan-kevitra masiaka sy manafintohina tao amin'ny vondrona WhatsApp iray antsoina hoe Hetsika DSM 114U amin'ny fiteny Kiswahili i Atoa Mtegwa. Tahaka izao ilay fanehoan-kevitra raha adika:
Tsy fantatro izay zava-mitranga ao an-dohan'ny JPM [ ny Filoha ao Tanzania John Pombe Magufuli] … Tsy hainy akory na dia ny miala tsiny aza. Eto amin'izao dingana izao isika noho ny fiheveran'ny olona iray fa manana ny fahamarinana hatrany izy … mila mahatakatra izy fa tsy idiran'ny lolom-po ny politika ary tsy fahavalo ny mpanohitra… tokony hianatra hifaninana amin'ny mpanohitra izy amin'ny alalàn'ny adihevitra fa tsy ny fampiasan-kery.
Tamin'ny tranga iray hafa vao haingana, nosamborina i Dr. Oscar Magava, mpampianatra iray any amin'ny Oniversiten'ny Fanabeazana Mkwawa any amin'ny faritra Iringa noho ny filazana fa nanala baraka ny Filoha izy.
Nilaza ny kaomandim-paritry ny pôlisy Dr. Julius Jengi Gava tamin'ny 15 Septambra fa nahazo tatitra izy ireo amin'ny fampiasan’ ilay mpampianatra ny tambajotra sosialy momba ny fihoaram-pahefana ataon'ny filoha. Tsy nilaza izay tambajotra sosialy nampiasainy sy izay tenin'i Magava marina momba ny filoha izy.
Hatramin'ny nandresen'ny Filoha John Magufuli tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Oktobra 2015, olona 14 no efa ho nosamborina sy voampanga ho nanevateva ny Filoha tao amin'ny media sosialy. Hatreto, olom-pirenena iray ihany, Isaac Abakuki Emily, no hita fa meloka tamin'ireo fiampangana. Voaheloky ny Fitsarana ao Arusha izy tamin'ny fanevatevana ny Filoha Tanzaniana John Magufuli tao amin'ny pejiny Facebook tamin'ny Jona 2016
Voampanga tamin'ny 22 Jona teo ambanin'ny lalànan'ny Fifandraisana Elekitronika sy Paositaly ao Tanzania ny olom-pirenena Tanzaniana Leonard Mulokozi tamin'ny hafatra tao amin'ny WhatsApp izay nolazain'ireo manam-pahefana fa “fanevatevana” ny filoha Tanzaniana, John Magufuli.
Tamin'ny Oktobra 2015, Tanzaniana roa no lasibatra voalohany tamin'ny lalàna vaovao. Benedict Angelo Ngonyani, 24 taona, mpianatra ao amin'ny Sekolin'i Dar es Salaam Momba ny Teknolojia, izay voampanga ho namoaka fitaovana ” hosoka na tsy voamarin'ny manam-pahefana tompon'andraikitra.” Voalaza fa nandefa lahatsoratra Facebook izy milaza fa nampidirina hopitaly rehefa avy nihinana sakafo misy poizina ny Lehiben'ny Tafika ao Tanzania, ny Jeneraly Davis Mwamunyange.
Tamin'ny volana Novambra 2015, voampanga tamin'ny Andininy faha 16 amin'ny lalànan'ny heloka an-tserasera 2015 ny Tanzaniana efatra – Leila Sinare, Godfrey Soka, Deo Soka ary Monica Gaspary Soka –noho ny famoahana vaovao diso mifandraika amin'ny fifidianana tao fampitan-kafatra WhatsApp. Nilaza ny lehiben'ny Fampanoavana fa namoaka vaovao amim-peo tao amin'ny vondrona WhatsApp antsoina hoe “Soka Group” ireo voampanga hamitahana ny vahoaka nandritra ny fifidianana ankapobeny tanzaniana tamin'ny Oktobra 2015 izay nisian'ny fiampangana manao hosoka tamin'ny fifidianana.
Voampanga eo ambanin'ny Lalànan'ny heloka An-tserasera vaovao izay niteraka adihevitra ny ankamaroan'ireo olom-pirenena ireo. Namorona ny lalànan'ny heloka an-tserasera ireo manampahefana mba ho fitaovana manan-danja hiadiana amin'ny sary fametavetana ankizy, fandrahonana an-tserasera, fisolokiana an-tserasera, votoaty manavakavaka sy mankahala vahiny an-tserasera, hafatra manelingelina (izany hoe spam), fidirana an-tsokosoko tsy ara-dalàna amin'ny fifandraisana, ary ny famoahana vaovao tsy marina.
Nosoniavin'ny filoha teo aloha Jakaya Kikwete ho lalàna manan-kery tamin'ny Mey 2015 ilay lalàna nampiadi-hevitra, na dia teo aza ny tsikera avy amin'ny mpanao politika mpanohitra sy ireo mpisera ao amin'ny media sosialy ary ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona.